पूर्वेली खवर – DhankutaKhabar
Category: पूर्वेली खवर
राजविराजमा ग्रिनेड बम भेटियो, बम नजिकै अखिल तराई मुक्ति मोर्चाको पर्चा
सप्तरी, ७ माघ । सप्तरीमा ग्रिनेड बम फेला परेको छ । राजविराज नगरपालिका–१ स्थित फनचराज दुगडको घर अगाडि आज बिहान ग्रिनेड बम फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । राजविराजस्थित कृष्ण … Read More... अर्नाको आक्रमणबाट महिला गम्भीर घाइते
इनरुवा, ७ माघ । अर्नाको आक्रमणबाट बिहीबार एक महिला गम्भीर घाइते भएकी छन् । घाइते हुनेमा सुनसरी मधुवन–१ बस्ने ४० वर्षीया राधादेवी खत्वे रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको … Read More... अध्यक्ष ओलीद्वारा आज तीन ठूला योजनाको शिलान्यास
सुरुङ्गा(झापा), ६ माघ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज झापा क्षेत्र नम्बर ७ मा तीन ठूला योजनाको शिलान्यास गर्नुभएको छ । उहाँले झण्डै रु साठी करोडभन्दा माथिका ती … Read More... ‘प्रहरी मेरो साथी’ ले सर्वसाधारणमा झन त्रास सिर्जना गर्‍यो
झापा, ६ माघ । झापा भद्रपुरका नगरवासीले ‘प्रहरी मेरो साथी’ नभएको गुनासो गरेका छन् । वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरले ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ … Read More... कसैको प्रेममा पर्नु भएको छ ? फेसबुक चलाउँदा ख्याल गर्नोस् !
झापा, ६ माघ । चार महिनाअघि बिर्तामोडको नाम चलेको एउटा कलेजमा अध्ययनरत सुस्मिता (नाम परिवर्तन) ले प्रेमीलाई आफ्नो नग्न तस्वीर पठाइन् । उनका अनुसार प्रेमीले धेरै कर गरेपछि दुबैजनाको सहमतिमा … Read More... ओलीलाई उछिन्दै माओवादी केन्द्रका नेताद्वारा पुल शिलान्याश
काठमाडौं, माघ ६ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार शिलान्यास गर्ने भनिएको झापाको दमक १७ र मोरङको राजघाट–९ जोड्ने बेतेनी–माँवा–आम्बारी पुल बुधबार नै माओवादी केन्द्रका नेताले शिलान्यास गरेका छन् … Read More... बेल्टारमा अतिक्रमण रोक्न बाँध भत्काइयो
गाईघाट (उदयपुर), ६ माघ । उदयपुर जिल्लाको बेल्टार बसाहा नगरपालिकास्थित वडा नम्बर २ को द्वारखोला आसपासमा स्थानीय जग्गा अतिक्रमणकर्ताले नदी क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गर्न निर्माण गरेको बाँध हालै स्थानीय … Read More... Posts navigation